လူအဖြစ် အသက်ရှင်ခြင်းထဲစတင်သည်နှင့် အဘယ်သို.သောသူဖြစ်ပါစေ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် အဘယ်ကြောင့်အသက်ရှင်နေရသနည်းဆိုသည့် မေးခွန်း၏အဖြေကို တိကျစွာနားလည်ကြရမည်။ ဤ အကြောင်းအရာသည် ဘာသာတရားမဟုတ်ပါ။ ပိုင်ရှင်၏တရားအကြောင်း ဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ သူ.ဖါသာသူဖြစ်ပေါ်လာသောလူနှင့်အရာဝထ္တုများဟူ၍ လုံးဝမရှိပေ။ လူအပါအဝင် အရာခပ်သိမ်းအား လုံးသည် ပိုင်ရှင်မဲ့ လုံးဝမဟုတ်ပေ။ ပိုင်ရှင် ရှိသည်။ နာရီ၏စက္ကန်.လက်တံ တစ်ပတ်ပြည့်အောင် လှည်လျှင် နာရီ၏မိနစ်လက်တံသည် အခြားကိန်း တစ်ခုဆီသို. ရွှေ.သွားလေသည်။ ထိုမိနစ်လက်တံသည်လည်း တစ်ပတ်ပြည့်အောင်လှည့်သွားလျှင် နာရီ၏နာရီလက်တံသည် အခြားကိန်းတစ်ခုဆီသို. ရွှေ.သွားပြန်သည်။ ထိုသို.လှည့်ပတ်နေသော နာရီ သည် သူ.ဖါသာသူဖြစ်ပေါ်နေသည်မဟုတ်ပေ။ လူကတီထွင်ထားသောကြောင့် ဖြစ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပြီး လူ၏ပြင်ဆင်ပေးထားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း လှည်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူတိုင်းနားလည်ကြသည်။ ထိုနည်းတူ ကမ္ဘာသည် သူ.ဖါသာသူ လှည်နေရာတွင် ၂၄-နာရီကြာသည်။ 'လ' သည် ကမ္ဘာကို တစ်ပတ် ပတ်ရာတွင် တစ်လကြာလေသည်။ ထိုသို. ကမ္ဘာသည်မိမိဖါသာလှည်နေစဉ် 'လ' က ကမ္ဘာကိုပတ်ကာ 'ကမ္ဘာ'ရော 'လ' ပါ 'နေ'ကိုပတ်နေကြသည်။ ကမ္ဘာနှင့်လတို.သည် ‘'နေ'ကိုပတ်ရာ တွင် တစ်နှစ် ကြာလေသည်။ ကမ္ဘာ၊နေ၊လတို.၏ ဖြစ်စဉ်သည်လည်း သူ.ဖါသာသူဖြစ်နေခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ပေ။ ထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်က ကြံစည်စီစဉ်ပေးထားသောကြောင့် ဖြစ်တည်ရွှေ.လျှားနေ ကြသည်မှာ ငြင်းစရာမလိုအောင်ပင် ခိုင်မာသေချာနေသည်။နာရီကိုမူကား ရှိပြီးသားအရာထဲမှ လူက တီထွင်ထားသော်လည်း နေ၊လ၊ကမ္ဘာ တို.နှင့် လူအပါအဝင် အရာခပ်သိမ်းအားလုံးကို ဘာမှမရှိသော နေရာမှ ရှိလာအောင် ထာဝရဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းထားသည်။
ထာဝရဘုရားသခင်က လူကိုအကျိုးမဲ့အသက်ရှင်ဖို.ရန် အလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍ လူကိုအဘယ် ကြောင့်ဖန်ဆင်းထားရသနည်းဆိုသည့်အကြောင်းကို လူမှန်သမျှသိရှိပြီး အသက်ရှင်ခံစားနိုင်အောင် သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့် ကျေညာထားသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်က လူကိုအဘယ်ကြောင့်ဖန်ဆင်းထား ရသနည်းဆိုသည့်အချက်ကို နားမလည်သောကြောင့် ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိနေရာဒေသအနှံ.အပြားမှ လူ. အသိုင်းဝိုင်းများထဲတွင် “ဒုစရိုက်ûပခြင်းများ၊ ဘဝတူ လူအချင်းချင်းကို အထင်သေးခြင်းနှင့် ဖိနှိပ်ခြင်း များ၊ မိမိဘဝကိုတန်ဖိုးမဲ့စွာ အသက်ရှင်နေခြင်းများ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ထင်ရာစိုင်းခြင်း ဆိုသည့်အနက်အဓိပ္ပါယ်ထဲတွင် ပိုင်ရှင်မဲ့ခြင်း၊ ပိုင်ရှင်ကိုမသိခြင်းတို. ပါဝင် နေသည်။
အံ့သြချီးမွမ်း၍မကုန်နိုင်သောအခွင့်ထူးများကို လူမှန်သမျှခံစားကြဖို. ထာဝရဘုရားသခင်က လူကို ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသည့် စကားသည် ပိုင်ရှင်၏ထာဝရသစ္စာစကားဖြစ်သည်။
၁။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် ကျေးဇူးûပချင်လို. ဖန်ဆင်းထားသည်။
၂။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် ဖန်ဆင်းရှင်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းထားသည်။
၃။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် ဖြောင့်မတ်စွာဖန်ဆင်းထားသည်။
၄။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် ထာဝရအသက် ပေးထားသည်။
၅။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားသခင်၏သားသမီးများအဖြစ် ဖန်ဆင်းထားသည်။
၆။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် ဖန်ဆင်းရှင်၏ဘုန်းတော်ကိုဖေါ်ပြရန် ဖန်ဆင်းထားသည်။
၇။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် ဆင်ခြင်တုံတရား ပေးထားသည်။
၈။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် အုပ်စိုးခွင့်ပေးထားသည်။
၉။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် အစဉ်အမြဲနေရန် ဖန်ဆင်းထားသည်။
၁ဝ။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် အစဉ်အမြဲဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်ရန် ဖန်ဆင်းထားသည်။
၁၁။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် လူကိုပေးထားသောကောင်းကြီးများခံစားရာတွင် ခိုင်ခံ့မြဲမြံဖို.ရန် ပညတ်
၁၂။ လူကိုဖန်ဆင်းရာတွင် ဖန်ဆင်းရှင်၏မေတ္တာပြချင်လို. ဖန်ဆင်းထားသည်။
လူကိုအဘယ်ကြောင့်ဖန်ဆင်းထားရသနည်းဆိုသည့် ထာဝရဘုရားသခင်၏အကြံအစည်ကို မသိသောသူတိုင်း၏အသက်တာသည် အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာပင် ဖြစ်သည်။ အကျိုးမဲ့အသက်ရှင်ခြင်း သာ ဖြစ်သည်။ အချည်းနှီး အချိန်ကုန်ကြိုးစားနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ပိုင်ရှင်ကို မသိသောသူ ဖြစ်သည်။ မော်တော်ကားကို အဘယ်ကြောင့်တီထွင်ထုတ် လုပ်ထားရသည်ကို မသိသောသူတိုင်းသည် မော်တော်ကားပိုင်ဆိုင်ရခြင်း၏ အကျိုးကိုမသိ၊ထိုမျှမက မခံစားရသောသူသာဖြစ်သည်။ ထို.ကြောင့် လူမှန်သမျှ လောက၌ အကျိုးရှိစွာအသက်ရှင်ဖို.ရန် ပိုင်ရှင်ကိုသိရှိရမည်။ ပိုင်ရှင် ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းသိရှိပြီး အသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤလောက၌အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အောင်မြင် သော လူ.ဘဝကို တည်ဆောက်လိုလျှင် အဘယ်ကြောင့် ထာဝရဘုရားသခင်က လူကိုဖန်ဆင်းထားရ သနည်းဆိုသည့်အချက် အပေါ်၌သာတည်ဆောက်နိုင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကို သိသောသူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ပြောဆိုချက်များသည်လည်း လူ.အသိုင်းအဝိုင်း၏တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည် သေချာသည်။ ထိုမျှမက စစ်မှန်သောဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘဝများကို ပိုင်ဆိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
(၁) မိမိဘဝအတွက် ရည်ရွယ်ချက် ပျောက်နေသောသူများအား လမ်းမှန်သို. ဆွဲခေါ်ယူစေမည်။
(၂) အားငယ်နေသောသူများအား ဘဝကိုရဲရင့်စွာ ကျော်ဖြတ်ဖို.ရန် ခြေလှမ်းစတင် စေလိမ့်မည်။
(၃) မိမိလုပ်ဆောင်ချက်တိုင်း၊ပြောဆိုချက်တိုင်း၏ အကျိုးကိုလည်းခွဲခြားသိမြင်လာစေ မည်။
(၄) ဖြစ်တည် အသက်ရှင်နေရသော လူ.ဘဝ၏ အမှန်တရားကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာသိမြင် ခံစားလာစေမည်။
(၅) ထာဝရအမှန်တရားကို ရှာဖွေနေသောသူများအား ပြီးပြည့်စုံသောဝမ်းမြောက် ခြင်းကို ခံစားစေလိမ့်မည်။
How wonderfully privileged you are. You have been created by God, and only God. Contrary to popular belief, all things were created by the Almighty. Bible scholar Awng Ja Ulung provides new insight of our Heavenly Father’s plans and purpose for man.
Ja Ulung answers the questions as to why: God made man upright.
- Human beings have been created as His own children.
- Human beings are given conscience.
- Human beings have been given dominion.
- Human beings are created to commune with God and to serve Him.
Ja ULung’s wonderful look into these and other questions will leavealasting impression and createadeeper love and understanding of the One who created you. A must-read if you seek to fully understand the depth of God’s love for His creations.
စာအုပ်ဆိုင်မှ ၀ယ်ယူရန် WINEPRESS BOOKS